साझामा स्मार्ट कार्डबाट बस भाडा तिर्ने प्रविधिको परीक्षण -
साझामा स्मार्ट कार्डबाट बस भाडा तिर्ने प्रविधिको परीक्षण
प्रबिधि | Monday, 16th November 2015, 07:23 PM |
काठमाडौँ, ३० कात्तिक । नेपाल बैंकको सहकार्यमा नेपालमा पहिलोपटक साझा यातायातले यात्रुलाई पैसाको सट्टा स्मार्ट कार्डका माध्यमबाट भाडा तिर्ने प्रविधिको परीक्षण थालनी गरेको छ ।
साझा यातायातको कार्यालय पुल्चोकमा आज आयोजित कार्यक्रममा स्मार्ट यात्रा कार्डको परीक्षणको सुरुवात गरिएको हो । कार्ड परीक्षणको सुरुवात् गर्दै यातायातका अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितले यातायात क्षेत्रमा नवीन प्रविधिको सुरुवात् गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो ।
नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्रपताप शाह र भारतीय नुस्पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हर्मितसिंह सेठीले यो प्रविधिलाई अन्य यातायातले पनि लागू गरेमा यात्रुका लागि फाइदाजनक हुने बताउनुभयो । यातायातले एक महिना परीक्षण गरी साझाका सबै बसमा यो प्रविधि जडान गर्नेछ । नयाँ बसपार्क, नारायणगोपालचोक, लगनखेल रुटमा चल्ने बा १ख २२१७ नम्बरको बसबाट स्मार्ट यात्रा कार्ड प्रयोग गर्ने प्रविधि परीक्षण गरिएको थियो ।
एक महिनापछि साझाका अन्य १६ वटा यातायातमा पनि यो प्रविधि लागू गरिने यातायातका कामु कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रराज पाण्डेले बताउनुभयो । उपत्यकाका विभिन्न रुटमा हाल साझाका १६ वटा बस सञ्चालनमा छन् । “छ महिनामा काठमाडौँ महानगरपालिकाको सेयरमा रु १० करोडका २५ वटा बस थप्ने तयारी भएको छ, थपिने बसमा पनि यो प्रविधि जडान गरिनेछ”–निर्देशक पाण्डेले भन्नुभयो ।
रु दुई सयको कार्ड किनेर स्मार्ट कार्ड प्रविधि साझा बसमा प्रयोग गर्न सकिने यातायातले जनाएको छ । यसमा रु ५० को मौज्दात हुनेछ । साझाको पछाडिको ढोकाबाट चढ्ने बित्तिकै डिभाइसमा कार्ड देखाउने र अगाडिको ढोकाबाट झर्ने बेलामा पनि डिभाइसमा कार्ड देखाएर झरेपछि दुरी अनुसारको भाडा काटिनेछ । यसलाई बेला बेलामा नवीकरण गर्नु नपर्ने भएकाले यो एटिएम भन्दा पनि झन्झट मुक्त छ ।
पैसा सकिएपछि मोबाइलको रिचार्ज गरेजस्तै गरी रिचार्ज गर्न सकिनेछ । कार्ड हराएमा भने अर्को कार्ड किन्नुपर्नेछ । यो प्रविधिबाट भाडा तिर्दा बढी भाडा नपर्ने भएकाले यात्रु ठगिने सम्भावना कम हुनेछ । विकसित देशमा लागू भएको यो प्रविधि नेपालमा पहिलोपटक भित्रिदा यात्रु खुसी भएका छन् ।
सुरुवात् कार्यक्रममा उपस्थित यात्रु रामेश्वर श्रेष्ठले सरकारले लागू गरेको भाडादर कार्यान्वयनका लागि यो प्रविधि उपयोगी देखिएकाले यातायात व्यवस्था विभागले सबै सार्वजनिक यातायातमा लागू गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
मोबाइलमा विशेष एप्लिेकेसन डाउनलोड गरी साझाको बस कहाँ गुिडरहेको छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । यसैका आधारमा यात्रु घरबाट निस्कन सक्नेछन् । यसका लागि समेत यो प्रविधि उपयोगी हुने सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो । यात्रुले प्रविधिमार्फत् तिरेको भाडा नेपाल बैंकमा रहेको साझा यातायातको खातामा जम्मा हुन्छ । डिभाइस राखेमा कार्डको प्रयोग विभिन्न सुपर मार्केटमा पनि गर्न सकिन्छ ।
यातायातमा हाल सरकारको ७० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर छ । आव २०७२÷७३ को बजेट वक्तव्यमा साझाको पुरानो रु १० करोडको ऋणलाई सेयरमा परिणत गर्ने घोषणा गरेकाले ९५ प्रतिशत लगानी सरकारको पुग्ने निर्देशक पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । साझालाई सक्षम बनाउँदै लैजान सके उपत्यकामा यातातको एकाधिकार हट्ने विश्वास गरिएको छ ।
नेपाल टेलिकमको सुधारका लागि मार्गचित्र प्रस्तुत
काठमाडौँ, ८ वैशाख । नेपाल टेलिकमले अन्य सेवाप्रदायक संस्थाको तुलनामा आफूलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन, गुणस्तरीय...
काठमाडौँ, ११ चैत । नयाँ बन्ने घरमा सौर्य बत्ती जडान गर्न प्रोत्साहन गरिएपनि सो कार्यले गति लिन सकेको छैन...
डिजिटल प्रविधिबाट घरधुरी सर्वेक्षण गरिने
इलाम, १० चैत । इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्दै घरधुरी सर्वेक्षणको गर्ने भएको छ...
रत्नपार्कमा वाइफाइ सेवा सुरु
काठमाडाँ, ५ चैत । काठमाडौँको रत्नपार्कमा आजदेखि वाइफाइ सेवा सुरु भएको छ । रु २५ तिरेर रत्नपार्कभित्र छिर्ने...
पहिलो सोलार स्कुटर सञ्चालनमा
काठमाडौँ, १० फागुन । दमौलीका १७ वर्षीय विकल्प ढुङ्गानाले दुई वर्ष लगाएर सौर्य ऊर्जाबाट चल्ने स्कुटरको निर्माण...
Einstein's gravitational waves seen from black holes
Scientists are claimingastunning discovery in their quest to fully understand gravity. They have observed the warping of space-time generated by the collision of two black holes more thanabillion light-years from Earth................................................... This news is from...
Apple Watch market share blows away every other smartwatch, including Android Wear
There areaplethora of smartwatches and other wearables available today, but it appears that one device has far surpassed all the others. Canalys, independent analyst company, released its smart watch report for 2015, and let's just say the Apple Watch kicked some serious...
झापामा सूचना प्रविधि मेला
काँकडभिट्टा (झापा), २७ माघ । झापामा पहिलोपल्ट सूचना प्रविधिसम्बन्धी मेला ‘क्यान इन्फोटेक–२०१६’को आयोजना...
साढे तीन लाखबाट ‘क्यान इन्फोटेक’ को अवलोकन
काठमाडौँ, २० माघ । कम्प्युटर एसोसियसन नेपाल महासङ्घको आयोजनामा भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन भएको ‘क्यान इन्फोटेक’...